Shabakaddan internet-ka ayaa ah midda keliya ee ay leedahay xarunta ka-soo-warbixinta maaliyadaha si ay macluumaad u siiso guud ahaan dadweynaha mana ahan shabakad internet oo ganacsi ah. Shuruucda, xeer-nidaamiyeyaasha, dokumentiyada, dhabbe-tuseyaasha, iyo xiriirrada kale ee ay bixisey shabakaddan internet-ka ayaa hadafka keliya ee laga leeyahay uu yahay in la tixraaco, FRC si tooos ah iyo si aan toos ahayn ama si kale toona uguma ballanqaadeyso saxsanaanta iyo dhammeystiraanta macluumaadkan cid saddexaad laga heley ee kor ku xusan
Ku Saabsan NAMLC
Guddiga Qaran ee Ka-hortagga Lacag-Dhaqidda iyo La-dagaallanka maalgashiga/Maaliyadsiinta Argagaxisada.
Guddi Hawleedda AML/CFT
Guddgia Qaran ee Ka-hortagga Lacag-Dhaqidda (NAMLC) ayaa dhistey Guddi Farsamo la xiriirta (AML/CFT)
Hadal-qoraallada shirarka oo keydinaya tallaabooyinka ay qaaddey FRC ama Guddiga NAMLC.
Sharciga Hay’adaha Maaliyadda
Heshiis Is-faham (MoU)
Bayaan rasmi ah oo ay xarunta FRC u soo gudbisey Saxaafadda.
Shirarkii iyo siminnaarradii hore iyo kuwa soo socda.
Wadatashiyadii hore iyo kuwa soo socda.
Qaar ka mid ah keydka Sawirada Xarunta FRC.
FRC waxay ku dhawaaqeysaa habraacyada cusub ee lagu ansaxinayo hanaanka Qaadidda lacagaha Cadaanka ah ee la keenayo dalka iyo midda laga dhoofinaayo.
Xarunta Warbixinta Maaliyadeed ee Soomaaliya (FIU) waxay heshiis is afgarad (MOU) la gashay dhigeeda (FIU) Isutagga Imaaraadka Carabta.
20kii Bisha May 2021, Agaasimayaasha (FIU) Soomaaliya iyo (FIU) UAE, waxay qabteen xaflad ay ku kala saxiixanayeen heshiis Isfaham (MoU) oo u dhaxeeyay Xarunta Warbixinta Maaliyadeed ee Soomaaliya (FIU) iyo (FIU) Isutagga Imaaraatka Carabta. Xafladaas oo lagu qabtay habka Fogaan arag ah, Isafgardkaasi, wuxuu muhiim u yahay labada hay’adood xoojinta iskaashiga iyo wada shqeyntooda, maadaama labada dalka ay leeyihiin howlo ganacsi oo ballaaran.
Xeer-ilaaliyeyaashu, waxay lamaane u noqonayaan xafiiska xwm si ay uga kaaliyaan dambiyada culus ee maaliyadeed.
Abriil 10, 2021, wakiilo ka socda xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa soo booqday xafiiska XWM, markii ay yimaadeena, waxaa si dhaqsi leh ay u kormeereen si ay u fahmaan qaab dhismeedka waaxyada XWM iyo shaqooyinka mid kasta u gaarka ah. Xubnaha booqashada ku yimid iyo madaxda sare ee xwm, waxay wada fadhiisteen qolka kulamada ee xarunta oo ay ka bilaabatay howshii maalintaas.
Booqashada Shaqaalaha IMF, hormarinta qeybaha maaliyadda iyo dib-u-habaynta (CBS iyo XWM).
Bishii Abriil 07, 2021, Shaqaalaha IMF waxay ku booqdeen shir fogaan arag, hor-u-marka qeybaha Maaliyadda Soomaaliyeed iyo dib-u-habeyntooda oo ahaa habka fogaan araga (zoom).
Hagista lagu dalbanayo kormeerka ku salaysan u dhawaanshaha halista AML / CFT.
4 Maarso 2021 – kormeerayaashu, waxay kaalin muhiim ah ka qaateen ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada
Natiijooyinka guddiga hawleedka dhaqaalaha (FATF) Fadhiyadiisii 22, 24 iyo 25 Febraayo 2021.
Hay’adda guddi hawleedka dhaqaalaha (FATF) habka’ ee ay ku qiimeyso talooyinkeeda u hoggaansanaanta iyo wax ku oolka nidaamyada AML / CFT.
Hay’adda guddi hawleedka dhaqaalaha (FATF) habka' ee ay ku qiimeyso talooyinkeeda u hoggaansanaanta iyo wax ku oolka nidaamyada AML / CFT.
Hay’adda Socdaalka Soomaaliya oo Qabatay Kiisas La Xariira Socdaallo Sharci Darro ah
Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Dowladda Soomaaliya, Maxamed Aadan Koofi ayaa sheegay in hay’addu ay gacanta ku dhigtay kooxo isku xiran oo ka shaqeyn jiray Arrimo la xiriira socdaalka sharci darrada ah.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa yiri hoos ayan u dhignay maalgelinta Shabaab iyo Isis
Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa sheegay in dowladdu ay horumar ka sameyneyso joojinta lacagaha oo ka imanaya dalal kale. Isagoo ka hadlaysay shirkii wadatashiga ee halista lacag dhaidda iyo maalgelinta argagixisada ayuu sheegay in lacagaha uga imam jiray dalka dibadiisa in loo adeegsan jiray falalka argagixiso.
KULANKA 28aad EE MENAFATF
KULANKA 29aad EE MENAFATF
SHIRKA GUDIGA QARANKA EE NAMLC
Qaadid Lacag Caddan Ah
Xarunta Warbixinnada Maaliyadda (FRC)
Xarunta Warbixinnada Maaliyadeed (FRC)
Xarunta Warbixinnada Maaliyadeed (FRC) waa Unugga Sirdoonka Maaliyadeed ee Soomaaliya.
Tani waa barta internet-ka ee rasmiga ah ee u gaarka ah xarunta warbixinnada maaliyadeed oo loogu talogaley in macluumaad lagu siiyo dadweynaha iyo mana ah bar internet oo ganacsi.